Indlela yokuPosa amabali akho kunye nokunye okuninzi kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uwapapasha njani amabali akho kwi-Instagram nokunye okuninzi
Oktobha 25, 2020 0 IiCententarios 600
Kule nqaku siza kukuxelela zonke iinkcukacha malunga Ungawathumela njani amabali akho kwi-Instagram. Isihloko esifanelekileyo kwabo banomdla kwihlabathi ledijithali kunye neendlela ezikhoyo, kodwa abangaqhelananga neli qonga.
Uwapapasha njani amabali akho kwi-Instagram?
Inyaniso kukuba ukufaka umxholo kwi-Instagram akuyona inkqubo enzima kakhulu. Ewe kunjalo, ngaphambi kokwenza eli nyathelo kufuneka uthathe isigqibo ngohlobo lweempapasho ofuna ukuzabelana nabalandeli bakho kwaye ezingangqubaniyo nemigaqo-nkqubo yokupapasha yeqonga lenethiwekhi.
Ngamanye amagama, ukuba iakhawunti yakho yeyakho, uya kufuna ukwabelana ngemifanekiso yokuhamba okuthathileyo okanye okhethekileyo. Ngoku ukuba iakhawunti yakho yenzelwe ukuthengisa, injongo yakho iya kuba kukwandisa umxholo wakho ukuze ubhengeze uphawu lwakho.
Amabali e-Instagram lolunye lwezona zinto zidumileyo zesicelo. Inokushicilelwa kwemifanekiso emifutshane okanye iividiyo eziya kubakho ukujongwa iiyure ezingama-24.
Okulandelayo, siza kukhankanya amanyathelo aphambili papasha Amabali inokujongwa ngabo bonke abalandeli bakho:
Ngena inethiwekhi yentlalo, i-icon emile kwikhamera ibonakala phezulu ngasekhohlo, cofa kuyo kwaye uya kudluliselwa kwikhamera yeselfowuni.
Ezantsi ngasekhohlo uya kuba nenketho yokungena kwigalari yakho kwaye ukhethe ifoto okanye ividiyo ofuna ukuyisebenzisa; Kwakhona, unokurekhoda kwangoko ividiyo okanye uthathe isithombe esitsha.
Hlela umxholo oza kuwupapasha, enkosi kuhlaziyo oluqhubekayo lwe-Instagram, kunokwenzeka ukongeza iifilitha, iziphumo, izitikha, iiGifs, umculo okanye amazwi.
Kweli nyathelo lokugqibela, konke okufuneka ukwenze kukubhala inkcazo yomxholo oza kuwubonisa kunye nee-hashtag eziza kuhamba nazo. Okokugqibela unako papasha amabali akho e-Instagram.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba isitayile samabali akho siya kuxhomekeka kwinjongo ofuna ukuyifezekisa, umzekelo, ukuba ufuna ukunxibelelana nabalandeli bakho, sebenzisa ukhetho oluvumela ukuba bakubuze imibuzo kwaye emva koko bapapashe iimpendulo ngale ndlela.
Ukuba ujonge ukukhuthaza imveliso, dibanisa ikhonkco elihambisa abasebenzisi ngqo kwiwebhusayithi apho banokuyifumana khona. Khumbula ukuba uyile kwaye ngaphezulu kwayo yonke into iyahambelana nomfanekiso ofuna ukuwudlulisa.
Olunye upapasho onokulwenza
Kuba i-Instagram sisicelo esibonakalayo, kufuneka ukhathalele umgangatho wemifanekiso kunye nevidiyo ezipapashiweyo kuyo. Ukufumana abalandeli akwanelanga ukwenza upapasho olulula, apho iinkcukacha zingananzwa njengoko kufanelekile.
Kwimicimbi yokuThengisa ngeDijithali, kubalulekile ukuba ube nesicwangciso esiqinileyo seMidiya yoLuntu, ekuvumela ukuba ungene kubasebenzisi be-app kwaye ke ufumane ukubonakala kwegama lakho (elorhwebo okanye lomntu).
Nje ukuba uchaze uhlobo lweakhawunti oyifunayo kunye nenjongo ofuna ukuyifeza ngayo, amanyathelo okufaka imifanekiso kule nethiwekhi yentlalo aya kuba lula:
Cofa kwisimboli sokudibanisa (+) esihlala sivela kwindawo esezantsi esezantsi kwescreen sakho.
Emva kwexesha, bonisa indlela igalari yakho evula ngayo ngokuzenzekelayo ukuze ukhethe umfanekiso ofuna ukuwufaka eqongeni.
Ukuba uyathanda, i-Instagram ikunika ithuba lokuhlela imifanekiso ngaphambi kokuyipapasha ekugqibeleni.
Into elandelayo oya kuyenza kukongeza inkcazo ehamba nefoto yakho kwaye ikwabandakanya ii-hashtag eziphambili ukukhuthaza umbono wakho.
Okokugqibela, yongeza indawo kwaye uthumele ifoto.
Ukuze ufunde Ungawathumela njani amabali akho kwi-Instagram Kubalulekile ukuba uqonde ukuba zininzi iimpawu zayo ezidibanisa uthotho lweziphumo kunye neefilitha ezinegalelo ekuphuculeni umgangatho wemifanekiso epapashiweyo. Injongo yale misebenzi kukuhlengahlengisa umgangatho wefoto, ngokwahluka, ukugcwala, ukukhanya, umbala, phakathi kwabanye.
Ngokuqinisekileyo, ezi zinto zizixhobo ezifanelekileyo kwabo bafuna ukuhombisa kunye nokuqaqambisa umxholo wabo. Nangona kunjalo, ukwazisa igama lophawu ufuna olona mgangatho uphezulu kunye nobuchule bomxholo wakho ukuze ugqame kupapasho lwabanye abantu.
Ukufumana iziphumo zobungcali, kufuneka isixhobo sobungcali. Ukuza kuthi ga ngoku, unokufumana iinkonzo zeenkqubo zokuhlela iifoto, ezifakwe kwiKhompyuter yakho okanye kwiselfowuni.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukusebenzisa le app ukusasaza umxholo kuvumela, ngekhonkco nezinye iinethiwekhi zentlalo, ukuphendula imibuzo ethile, enje "Ungayithumela njani nge-Instagram isuka kuFacebook."
Thumela iividiyo kwi-Instagram
Kwimeko apho ufuna ukufaka kwiakhawunti yakho ye-Instagram yividiyo hayi umfanekiso, awunakukhathazeka malunga nayo kuba inkqubo iyafana naleyo yangaphambili.
Ungalayisha iividiyo ngokuthe ngqo kwifidi okanye uyenze nge-IGTV (xa zinde kunomzuzu). Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ungathumela kuphela iividiyo ezinomgangatho we-mp4.
Ukuhlelwa kwevidiyo kuya kufuneka ukhethe isixhobo sangaphandle esifana neFilmora, ukuba uqhagamshele kwikhompyuter okanye kwi-InShot, ukuba ufuna ukuyenza ngefowuni yakho.
Ividiyo ikwanenkcazo evumela abasebenzisi ukuba bazi ngakumbi ngomxholo owabelana nawo kunye nee-hashtag ezibeka uphawu lwakho kwinjini yokukhangela ye-Instagram.
Ungayithumela njani nge-Instagram kwi-PC, inokubonakala ngathi iyinkqubo enzima kuba akukho desktop okanye i-PC inguqulelo ye-Instagram okwangoku.
Kukho iindlela ezininzi zokwenza Ungayifaka njani i-Instagram kwikhompyuter, eyokuqala kukufikelela kwisikhangeli sakho sewebhu, ucofe ekunene xa sele kuvuliwe, ukungena kuHlola ukhetho.
Emva koko cofa i icon yezikwere eziblowu (ngasentla ngasekhohlo) kwiToggle yebar yesixhobo. Okokugqibela, cinezela f5 ukuvuselela iphepha; Nje ukuba uphawu lokudibanisa (+) lubonakale, unokukhetha imifanekiso kunye nevidiyo ofuna ukuzipapasha kwiprofayile yakho ye-Instagram.
Olunye uhlobo lwe shicilela kwiPC, kukhuphela usetyenziso olubizwa ngokuba yiGramblr, enoxanduva lokufaka iifoto eqongeni kwikhompyuter yakho ngaphandle kokusebenzisa iselfowuni.
Ukuyiphatha akunzima, into yokuqala ekufuneka uyenzile emva kokukhuphela esi sixhobo kukungena ngaphakathi ukuze ulayishe ifoto oyifunayo kunye okanye ngaphandle kwezihluzi ozithandayo.
Ungalibali ukongeza inkcazo kunye nee-hashtag eziza kunyusa umgangatho wopapasho lwakho. Eyona nto intle malunga nesi sicelo kukuba ikuvumela ukuba ucwangcise ixesha ofuna ukuba umxholo wakho upapashwe ngalo.
Ngokukwanjalo, ukhuphelo lwe-emulator yeselfowuni yePC yenye indlela efanelekileyo yokusebenzisa i-Instagram. Nge-Emulator ye-Mobile Browser, (ehambelana ne-Chrome), kuya kufuneka ungene kuphela kwiwebhusayithi yeqonga kwaye uvumele ulwandiso.
Okokugqibela, ngena ngaphakathi kwaye uqalise ukulayisha iividiyo kunye nemifanekiso. Olunye lweempawu zolu lwandiso kukuba luvumela ubungakanani apho ufuna ukuba iwebhu ibonwe khona (ubungakanani beselfowuni).
Ukuba ulithandile inqaku lethu ku Ungawathumela njani amabali akho kwi-Instagram, sicebisa ukuba ufunde inqaku lethu Uyenza njani into yokupha nge-Instagram? etsala umdla.
1 Uwapapasha njani amabali akho kwi-Instagram?
1.0.1 1 nyathelo
1.0.2 2 nyathelo
1.0.3 3 nyathelo
1.0.4 4 nyathelo
2 Olunye upapasho onokulwenza
3 Hlela imifanekiso
3.1 Thumela iividiyo kwi-Instagram
3.2 Papasha kwi-PC
Kulandelelana njani abo babona amabali e-Instagram avela?
Ungababona njani abalandeli bam be-Facebook kwiselfowuni?